कार्तिक २६ गते बिहान हामी कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलधाम, मधुवनधाम हुँदै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित जगदिशपुर ताल (रामसार क्षेत्र), हजारौं शाक्यहरुको नरसंहार गरिएको सग्रहवाको लम्बुसार ताल, कनकमणि बुद्धको जन्मस्थान निग्लिहवाको अशोक स्तम्भ, गौतम बुद्धका पिता शुद्धोधनले राज्य गरेको कपिलवस्तुको राजधानी (जहाँ गौतम बुद्धले २९ वर्ष बिताएका थिए) तिलौराकोट दरबार र त्यहाँ रहेको पुरातात्विक संग्रहालय, बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेपछि पहिलो पटक पिता शुद्धोधन, श्रीमती यशोधर र छोरा राहुललाई भेटेको स्थान कुदान हुँदै गौतम बुद्ध जन्मस्थानमा रहेको मायादेवीको मन्दिर र अशोकस्तम्भ पुगेर त्यहाँको प्राचीन र ऐतिहासिक ठाउँको अवलोकन गरियो ।
यस दौरान तिलौराकोटमा पुरातात्विक विभागका कर्मचारीहरुले र लुम्बिनीमा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीहरुले त्यहाँको प्राचीन र ऐतिहासिक तथ्यहरुको जानकारी गराउनुको साथै त्यहाँको वस्तुस्थितिको अवलोकन गराउनु भएको थियो ।
लुम्बिनीको भ्रमणपछि हामी भारतको पिप्रहवा हुँदै नेपाल भारत सीमा नजिकै भारतले कपिलवस्तु भनेर दावी गरेको ठाउँमा गयौं र त्यहाँ रहेको बौद्ध विहारको अवलोकन गर्यौं ।
भोलिपल्ट २७ गते परासीको सुस्ता क्षेत्र लगायतको भ्रमणमा निस्कियौं । बाटामा बुद्धको मावली गाउँ परासीको देवदहमा रहेको पाकरीको प्राचीन विशाल वृक्षको अवलोकनपछि वर्दघाटको बाढीपीडित चोकबाट हामी सुस्तातर्फ लाग्यौं । डुंगाबाट नारायणी नदी तरेर सुस्ता पुग्दा सुस्ता बचाउ अभियानका साथीहरुले हामीलाई उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहनु भएको थियो ।
उहाँहरुले खानपिनको व्यवस्था र छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्नु भएको रहेछ । छलफल कार्यक्रममा सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ, उपाध्यक्ष आदम खाँ, सचिव जयप्रकाश चौधरी, रवीन्द्र जैसवाल र लैला वेगम लगायतकाले सुस्तामा भारतीय पक्षले गरेको हस्तक्षेप र अतिक्रमणको विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरिरहेको घटनाक्रमबारे विस्तृत जानकारी गराउनु भएको थियो ।
छलफलमा सुस्तावासीहरुले नेपाल सरकारले सीमा समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्ने र सुस्ताको विकासको निम्ति ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जसमा सुस्ताको सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले भारत सरकारसँग तत्काल पहल अगाडि बढाउनुपर्ने, हाल सुस्तावासीहरु मध्य कैयौंको नागरिकता र जग्गाको लालपूर्जा समेत नभएकोले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुस्ताको जीवनलाई सहज बनाउन नारायणी नदीमा तत्कालै झोलुंगेपुल बनाउनुपर्ने साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटो लगायत विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने रहेको थियो ।
सुस्तावासीहरुले दिएको जानकारी अनुसार सुस्तामा हाल २६५ घर र करिब ३२०० जति जनसंख्या रहेको छ । करिब २१ हजार हेक्टर भन्दा बढीमा फैलिएको सुस्तामा करिब ८ हजार हेक्टर जग्गामा मात्र सुस्तावासीको भोग गरिरहेको र बाँकी क्षेत्र विवादित अवस्थामा रहेको छ ।
सुस्ताको पुरानो बस्ती नारायणी नदीले बगाएपछि त्यहाँबाट पूरै गाउँ नै विस्थापित भयो र त्यहाँका वासिन्दालाई तात्कालिन नेपाल सरकारले विभिन्न ठाउँमा पुनर्वास गराएको थियो । कालान्तरमा नदीले धार परिवर्तन गर्दै नदी पश्चिमतर्फ सर्दै गयो र उक्त ठाउँ पुन खेतीयोग्य भयो ।
त्यसपछि पूर्वतर्फबाट भारतीय पक्षले मिच्दै बाली लगाउन थालेपछि उक्त जमीनको स्वामित्वमा विवाद हुँदै आएको छ । हाल त्यहाँ सीमा स्तम्भ नभएको कारण भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । उक्त जमिनको लालपूर्जा नेपालीहरुको नाममा छ । तर भारतीय सुरक्षा फोर्सले नेपालीहरुलााई भोगचलन गर्नबाट रोकिरहेको छ । यस्तै हाल बस्ती रहेको ठाउँबाट पूर्व दक्षिणतर्फ रहेको आफ्नो जग्गामा जान बाटो (कलभर्ट) बनाउँदा समेत सुस्तावासीले भारतीय सुरक्षा फोर्ससँग झडप गर्नु परेको थियो । जसको कारण त्यहाँ सँधै तनावको अवस्था रहेको छ ।
छलफल कार्यक्रममा सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष, स्थानीय सुरक्षा निकाय प्रमुख, गण्डक नहरका लाइजन अफिसर, पार्टीका नेताहरु, सुस्ता बचाउ अभियानका अभियन्ताहरु लगायत स्थानीय जनताको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफल पश्चात् हामीले उक्त विवादित ठाउँको स्थलगत अवलोकन समेत गरेका थियौं । सुस्ताको समस्या सुस्तावासीहरुको मात्र नभएर सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको साझा संघर्षको विषय भएकोले हामी पनि तपाईहरुको साथमा छौं भन्दै सुस्ताको कहरलाई सत्ताको कानसम्म पुर्याउने बचनबद्धतासहित हाम्रो टोली सुस्ताबाट फर्किएको थियो ।
भ्रमणको क्रममा नारायणी नदीमा रहेको गण्डक पुल (व्यारेज) त्रिवेणीधाम र कावासोतीमा रहेको शास्वतधामको अवलोकन समेत गरेका थियौं । यसै दौरान कावासोतीमा नवलपुर जिल्लाका प्रजिअ दिपक नेपालसँग सुस्ताको समस्याबारे छलफल गर्यौं । छलफलमा सुस्ताको सीमा समस्या, जग्गाको लालपूर्जा र नागरिकताको समस्या हल गर्ने लगायत सरकारले अहिले पानी जहाज चलाउने योजना बनाइरहेको सन्दर्भलाई सुस्तालाई बन्दरगाहको रुपमा विकास गर्न सके देशको समृद्धिमा यो महत्वपूर्ण ठाउँ बन्न सक्ने र यो पर्यटनको एक हवको रुपमा विकास हुने सम्भावनाबारे गम्भीर चर्चा भएको थियो ।
बाटोभरि बुद्ध र सुस्तालाई सम्झदै हामी काठमडौं आइपुग्यौं ।भारतको हैकमवादी प्रवृत्ति र हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण नेपाल सँधै उत्पीडनमा पर्दै आएको छ । भारत नेपालको सीमा मिच्नुका साथै गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर प्रचार गर्न पनि हिच्किचाइरहेको छैन । तर, गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेको तथ्यलाई अब कसैले काट्न सक्दैन ।
लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ, मायादेवीको मन्दिर र कपिलवस्तुको तिलौराकोट दरबार विश्वसम्पदा सूचीमा सुचिकृत छ । सुस्ता भने आफ्नो अस्तित्वको लडाइ लडिरहेको छ । बेलाबेला ऊ बलात्कृत हुन्छ मुस्तण्डहरुबाट र चिच्याउँदै काठमाडौं आइपुग्छ आफ्नो रक्तमुच्छेृल माटो बोकेर, अस्तित्वको रक्षाको निम्ति
शासकहरुको खोजीमा । शासन सत्तामा बस्नेहरु सुस्ताबारे भलिभाँती जानकारी राख्छन् । तर वास्ता गरेका छैनन भन्ने गुनासो छ उनीहरुको ।
सीमा नक्सालाई अगाडि राखेर भारतसँग दुई पक्ष वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न किन विलम्ब ? के को हिचकिचाहट ? के यो राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग सम्बन्धित विषय होइन ? दुई देशबीचको सीमा समस्या लामो समयसम्म विवादित अवस्थामा रहनु दुई देशबीचको मित्रतालाई नै ठेस पु¥याउने विषय हो । सुस्ताको सीमा समस्या समाधान भएमा यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ मात्र गर्दैन बरु दुई देशबीचको भोलिको जलमार्गको संगम थलो बन्दै नेपालको एक प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा देशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नेछ । तर विडम्बना के छ भने सुस्ताको समस्या समाधान हुनुको साटो बल्झिरहेको छ ।
सुस्ता लगायत पूर्वको मानेभञ्ज्याङदेखि पश्चिमको लिम्पियाधुरासम्म ५०औं ठाउँमा सीमा अतिक्रमणको पीडाबाट नेपाल तड्पिरहेको छ । सुस्ता भारतीय शासकहरुको नेपाली भुमिमाथिको अतिक्रमणको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । भारतले नेपाली भूमिमाथि गरेको हस्तक्षेप बुझ्न नारायणी नदीको किनारमा रहेको सुस्ता नै काफी छ, महाकालीको टनकपुर, कालापानी वा लिम्पियाधुरा पुग्नै पर्दैन ।
चाहे बुद्ध जन्म भूमिको विषय होस् चाहे नेपाल भारत सीमाको विषय होस् यो समस्या नभएर भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिको उपज हो । यो तथ्यलाई भारतका शासकहरुले कहिले आत्मसात् गर्ने र कहिलेदेखि अशोक स्तम्भ र जंगे पिलरको पूर्ण सम्मान गर्न थाल्ने ? सारा देशभक्त नेपालीहरु यस बुद्ध भूमिबाट भारतीय शासकहरुसँग विनम्रतापूर्वक यही प्रश्न तेस्याइरहेका छन् /
बुढाथोकी नेकपाका नेता हुन्